Cid aan aniga ahayn kuma hadli karto afka Dowladda.... Geedi....
Prof. Cali Maxamed Geeddi "Mareykanka iyo Ingiriiska oo daba socda ayaa ka caga-jiidaya inay na aqoonsadaan" (WAREYSI)
Ra'iisal Wasaaraha dowladda Soomaaliya prof. Cali Maxamed Geeddi iyo wafdi uu hoggaaminayo ayaa galabta yimid magaalada Brussels ee waddanka Belgium. Ra'iisal Wasaaruhu, waxa uu martiqaad rasmi ah ka helay Ururka Midowga Yurub. Caawa ayaan la kulmay Dr Geeddi, waxaana na dhex maray wareysigan:
Su'aal: Marka hore waxaan ku weydiin lahaa, booqashada aad ku timid halkan (Brusseles), maxay la xiriirtaa?
Jawaab: Waxaan u imid inaan la kulmo madaxda Midowga Yurub. Waxaan berri la ballansanahay 25-ka safiir ee EU-da. Waxaan kaloo la kulmi doonaa Commissioner-ka kaalmada dibadda u qaabilsan Yurub, Louis Mitchel. Waxaan kaloo arki doonaa wakiillo ka socda dowladda Sweden.
S: Kulamadaas kala duwan kaddib, maxaad filaysaa maxsuulku inuu noqon doono?
J: Wax weyn ayaan ka filaynaa inay ka soo baxaan. Waxaan filayaa inay na caawiyaan politically iyo financially, gacanna ay nagu siiyaan sidii dalka aan u nabadeyn lahayn. Waxaan na sugeysa inaan nabadgelyo dalka ku soo celinno, ciidammadana aan xareyno, kaddibna caasimada nabadeyno.
S: Dowladdaadu illaa iyo hadda wax aqoonsi ah ma ka heshay Midowga Yurub?
J: Waa nala aqoonsan yahay, waxaadna ka aragtaa sida halkan la iigu soo dhoweeyey. Waxaan halkan ku imid casuumaad lay soo casuumay. Sidoo kale shirka aan la galayo safiirada 25-ka ayaa muujinaya in si rasmi ah na loo aqoonsan yahay.
S: Dr Geeddi, waxaa jirta in dhowaan dowladda Belgium ay safiirad u magacawdeen Soomaaliya. Ma u aragtaa Bruxelles inay sida Roma oo kale idinla dhacsan yihiin?
J: Waxaan ku faraxsanahay dowladda Belgium inay tahay dowladdii ugu horreysay ee safiir u soo magacaabata dowladdeyda. Safiirraddii la magacaabay waxay joogtaa Kenya, waxayna sugeysaa inay Jowhar tagto oo ay waraaqaha u geyso Madaxweynaha. Dowladda Belgium waan kaga mahadcelinaynaa arrintaas.
S: Laakiin waxaad mooddaa in dowladda Mareykanka iyo dalalka Carabtu aysan aqoonsi rasmi ah idin siinin weli. Maxay kula tahay sababtu?
J: Horta Carabtu shirkii ka dhacay Algers bay nagu aqoonsadeen, wax dhib ahna dhinacooda kama jiro, waana na aqoonsan yihiin. Dhinaca Mareykanka ayaa dhib ka jiraa iyo Ingiriiska oo Mareykanka ka daba ordaya, iyagaa ka cagajiidaya. Ingiriisku maadaama uu ku jiro Midowga Yurub waxaan filayaa inay mowqifkooda beddeli doonaan.
S: Maxaad is leedahay Mareykanku waa u diiddan yihiin inay idin aqoonsadaan?
J: Mareykanku waxay ku socdaan siyaasadda dhahaysa sug oo fiiri "wait and see policy." Laakiin waxaa noo socda xiriir, mar walbana waa wada xiriirnaa oo waa isla soconnaa.
S: Dr Geeddi, waxaad dhowaan ka dhawaajisay inaad ku tala-jirto inaad xil-ka-qaadis ku sameyso Wasiirro ka tirsan dowladdaada. Miyeysan habboonayn inaadan ku degdegin xil-ka-qaadis maadaama dowladdaadu tahay mid dib u heshiisiineed?
J: Tallaabadaas (xil-ka-qaadista) waan ku tala-jiraa, waxaana fulinayaa marka waqtigu ii saamaxo. Hal sano kaddib cidna lama sugayo. Dadka aan magacaabay waxaan iri xilalka ku shaqeeya ee ma dhihin sidaad rabtaan ka yeela. Uguma dhiibin jagooyinka inay annaga nagula soo jeestaan. Waxaanse kuu sheegayaa inaan xilka ka qaado kuma degdegaayo. Waddooyin kale ayaa jiri doona.
S: Dowladdii lagu soo dhisay Kenya, bacdamaa lagu qaybsaday qabiil, miyaan la dhihi karin raggan kaa soo horjeeda dooqaaga kuma soo gelin dowladda ee ama awooddooda ama qabiilladooda ayay ku yimaaddeen?
J: Qabiilladooda iyagaa qof beddela keensanaya. Ma ahaanayso booskaan aniguu ii xiran yahay weligey. Waxaan fiirinaynaa shacabka wixii u dan ah ee ma fiirinayno dan shaqsi.
Geedi: Horta qofka afka dowladda ku hadli kara aniga waaye. Cid kale kuma hadli karto afka dowladda. Warka rasmiga ah anigaa sheegaya. Qof kasta kama hadli karo dowladda arrimaheeda. Anigu waxaan iri baaritaan baa lagu sameynayaa arrintaas, guddi baana u saaray. Guddigii oo aan keenin wax natiijo ah lagama hordhici karo. Waxaan aniga u arkaa dadka weerarkaas fuliyey inay ahaayeen dad aan dowlad rabin.
Fahadow: Geeddi ma Zenaawi baa Eryi Kara Mise Cabdillaahi Yuusuf? Guji...
S: Toddobaadkii hore markii bamku kugula qarxay Muqdisho, dowladdaadu dhowr af bay ku kala hadashay. Dadka loo maleynayo inay ka dambeeyeen qaraxaas, Madaxweynuhu si kale ayuu uga hadlay, adigu si kale ayaad uga hadashay, Wasiiru dowlahaaguna wuxuu sheegay inay ka dambeeyaan Maxaakiimta. Miyaanay dowladdu hal af ku wada hadal?
J: Horta qofka afka dowladda ku hadli kara aniga waaye. Cid kale kuma hadli karto afka dowladda. Warka rasmiga ah anigaa sheegaya. Qof kasta kama hadli karo dowladda arrimaheeda. Anigu waxaan iri baaritaan baa lagu sameynayaa arrintaas, guddi baana u saaray. Guddigii oo aan keenin wax natiijo ah lagama hordhici karo. Waxaan aniga u arkaa dadka weerarkaas fuliyey inay ahaayeen dad aan dowlad rabin.
S: Haddaba, ma kula tahay Wasiiru dowlahaagu inuu qaldamay markuu Maxaakiimta Islaamiga ah ku eedeeyey qaraxaas inay ka dambeeyeen?
J: Waa qalad in cid gaar ah farta lagu fiiqo, laakiin maxaakiimtu iyagaa laba dhinac ku kala socda. Kuwo ku fekeraya siyaasad gaar bay u socdaan, kuwo garsoorka howlihiisa keliya ku howlana waa jiraan.
S: Dr Geeddi, waxaa jirta in diblomaasiyiinta ajnabigu sheegayaan in adiga iyo Madaxweynuhu aad dhowr mar isku qabateen maamulka xukuumadda, kaddib markuu soo fara geliyey howlahaaga. Ma jirtaa?
J: Arrintaasi waxba kama jiraan, diblomaasiyiintu iyagaa abuuranaya. Wax isku qabad maamulka ah nama dhex marin Madaxweynaha.
Waxaa wareystay: Maxamed Xaaji (Ingiriis).
Afeef: Aragtida waraysigaas waxaa leh qoraaga ku saxiixan
Raaf Ogaadeenya ka socda iyo dagaallo cadowga lagu jabiyay.
iyo Raaf Ogaadeenya ka socda iyo dagaallo cadowga lagu jabiyay. ka akhri halkan...